BIM Ọganihu - Nchịkọta Nzukọ Kwa Afọ - Geofumadas
Ọktoba, 2017 Engineering, innovations, Microstation-Bentley, topografia
Ọganihu nke ọkọlọtọ nke Ịkpụzi Ihe Ịkụzi Ihe (BIM) bụ isi okwu nke Nzukọ Kwa Afọ Infrastructure, emere na Ọktọba na Singapore. Agbanyeghị na ejiri akara hashtag # YII2017 weghaara akaụntụ Twitter m n'oge ahụ, lee, m na-eweta nchịkọta.
N'oge a, m ga-esi Nicaragua, mba nke m kpebiri ibi ndụ na-esote afọ. O nweghị ihe na-erughị awa 24 n'ime ikuku; otu trajectory Managua, San Salvador, Los Angeles, Taipei, Singapore, na, gbakwunyere mgbanwe nke oge na-agbanwe banyere ntụgharịgharị nke ntụgharị ụwa, pụtara ịhapụ Friday na nbata na Sunday na ehihie. Ya mere enwere m otutu oge ihi ụra, nke bụ ihe dị mma na ụgbọ elu ebe naanị ihe dị mma na ihe nkiri kọmputa na mono monofụfụ na mpaghara ụgbọ elu China.
Singapore abụwo nhọrọ a na-apụghị imeri emeri maka Nzukọ ahụ, n'èzí ka a nọrọ na Marina Sands. Obodo a bu ihe omuma di nma ma oburu na ihapu n'ebumnuche nke iju, igbanwe ma muta otu mba nke mmadu ruru nde mmadu isii ga-esi nwee oganihu mgbe nnwere onwe ya na njedebe ndi 6. Ọ na-ewe awa ole na ole iji gbanwee na ụdị "Singlish" ha, otu esi sụgharịa usoro njem, n'ụgbọala ndị na-ahụ maka ụkwụ na aka nri na mmetụta ahụ kpatara etu ha si eme ihe site na ịdị mfe nke ndekọ ndekọ aha ụlọ na usoro nlebara anya dị egwu nke ha. atọ cadastral.
Ije ije n'okporo ámá ndị a mere ka m nwee ike ịdabere na ọrụ ndị m hụrụ nanị na ihe ngosi na nnọkọ ndị ọzọ, dị ka mmiri dị ka ụdị DNA, nhazi nke ụlọ elu Marina ma ọ bụ ọhụụ nke nkwado gburugburu ebe obibi obodo.
Agbaghara m ịhụ ndị ọzọ ọrụ ibe Hispanic onodu, n'ihi na nke a oge a dị mkpa ka uru ndị na media n'okpuru onodu nke oru osụk, ndị ọzọ karịa na, n'ezie, ka burukwa maka ndị dị otú ahụ a na njem na-bụghị mgbe niile na e n'aka insurance bu ọbịa Enweela ọtụtụ ụlọ ọrụ mgbasa ozi si n'Ebe Ọwụwa Anyanwụ, bụ nke a ga-ebu ụzọ tinye afọ 6 nke nzukọ dị n'etiti Netherlands na United Kingdom. Ọbụna anyị bụ ndị nchịkọta 130, sitere na 28 mba, site na 10 dị iche iche asụsụ.
Na nke a, m nwere ọtụtụ ihe ị ga-agwa, ma maka nchịkọta nchịkọta, ndị a bụ akụkọ ndị kachasị m mmasị.
A na-akwado Pavilion Alliance. Nke a bụ usoro dị elu nke nnukwu aha anọ dị na teknụzụ emeela ka ha nwee ike ịhazi, nke ọ bụla n'ime ọrụ ha, na usoro mgbakwunye zuru oke;
Topcon. Dị ka ezigbo enyi nwoke maka njikọ na ubi nke na-eme ihe. Ha okwu ha ọhụụ na mere na-akpali ngosi nke applicability na ọdịdị ala, na ngwaọrụ tinyere na ngwá n'ụwa na-akpali akpali, ka ị na-he na ihe jupụtara n'ime na agaghịkwa achọ enyocha na Bouncers ịtụkwasị stakes, na-amụba na-ebupụta ma ọ bụ ịgbakọ mpịakọta. The obibia nke e mere na Topcon bụ uru ghọtara ya evolushọn na n'oge gara aga afọ atọ, karịsịa ma ọ bụrụ na anyị echeta na mgbalị mbụ bụ na Trimble, onye hapụ ndị oge ọ bụ na-emegide ya imperialist spirit.
Siemens. Ọhụụ ya iji mee ka ngwa ngwa nke ihe ụwa dị na-eme ka anyị nwee ezigbo Intanet nke Ihe (IoT). O gosiputara anyi gburugburu ebe anyi na-atu anya ya na obodo ndi nwere uche, ya na uche ya; ihe omuma jikotara site na batrị nke ichikota iwu na mpaghara ike eletriki nke obodo dum.
Bureau Veritas. N'ịbụ ndị na-amachaghị nke ọma na ọdịda anyanwụ a, Veritas bụ ụlọ ọrụ lekwasịrị anya njikwa njikwa ozi tozuru etozu. O nwere ngwa na ihe nlere nke ihe ndi di ndu, site na uzo oru.
Microsoft. Mgbe ọ gbalịsịrị ike ịnọ na asọmpi nke ụlọ ọrụ ọhụrụ, Microsoft nwetara ezigbo ihe mgbaru ọsọ ya na netwọkụ Azure ya, nke ndị na-erughị 90% nke ụlọ ọrụ ndị ahọpụtara na ndepụta Fortune 500. Microsoft, n'ụzọ megidere na ihe m kwara njakịrị na 2010, na nke a, ọ na-arụ ọrụ nke ịbụ ọwa nke data na-esi aga, ebe mgbe ọ gwụchara nke ọma ya (Microsoft, Windows, SQL Server) na mbọ dị ka azụmaahịa 2.0, ọ na-ezube iji uru na ọtụtụ narị ngwa weebụ ị nwere, mana o siri ike onye ọ bụla maara banyere ya.
Bentley Systems. N'ezie, ume a na mmekorita bụ Bentley, na megidere uche nke ndị na-eguzogide ịgbanwe nwetara site ekpokọtara ụlọ ọrụ, juru anyị. Ọ gaghị ekwe omume izere ịnakwere afọ ndị gara aga, buru n'uche na ndị guzobere ụlọ ọrụ ahụ emeela agadi; Otú ọ dị, dị ka m kwuru, ọ tụrụ m n'anya. Bhupinder ka ẹkenam a otu na-eto eto ihu na ha nwere ikike na-egosi na n'enweghị ike ọgwụgwụ ọhụrụ dị nnọọ na-echetara m nke ike nke Greg, bụ ndị yiri ka rejuvenate na ya egwu dee, mgbe ahụ dị mkpa oge na mfe nke na-ewere foto na sonyere ida, onye na-agwa ha okwu ha na-agaghị echezọ, n'ihi na o yiri ka ọ na-egosipụta nnukwu ncheta na ọmịiko ọmịiko.
Okwu ndụ nke Bhupinder na Keith mere, banyere ịkwado maka mgbanwe ahụ, enwewo ọganihu. N'ebe ha na-etolite nká na ụlọ ọrụ ha, ha ejiriwo ịmepụta ihe nketa anyị na-atụ anya na ọgbọ ọhụrụ ga-ebido, na-enweghị ihe efu ha bara n'ihi na ha na-ekere òkè n'ahịa na ụlọ ọrụ ndị ọzọ.
Demonstrative ngosi ndị Alliance Pavilion ila haziri ebe e Microsoft, Topcon, Veritas, Bentley Institute of academies na Xtation IX ama a na-akpali n'ezie dome gosipụtara azụ. Ihe ndị a na-emeghe n'oge niile, ọ bụ ezie na ha nwere oge ụfọdụ nke ngosipụta nke karịsịa na achọtara m ọzụzụ na-enye aka. The Bentley Institute adị ogologo oge gara aga, ma na-adịbeghị anya banyere a na-elekwasị anya bụ ọkachamara BIM Academy, nke a ikpe e gosiri na atọ asakde iso ese, nke bụ ezie na interconnected, m na uche delineate chọpụtara ọrụ n'etiti Bentley na Pavilion Alliance:
Entlọ Akwụkwọ Bentley Construction. Nke a bụ akara ndị tozuru etozu, nke bụ njikọ na-agbakwunye mbọ Topcon na Bentley.
Adị Modelling Academy. Nke a n’uche m ga-abụ usoro njikọta n’etiti Bentley na Veritas.
BIM Ọganihu Academy. Nke a bụ njikọta n'etiti SIEMENS na Bentley.
Oge ga-agwa ma ọ bụrụ na echiche m ziri ezi.
Ụdị 2.0 na-eme ka m kwekọọ na ígwé ojii. Bentley malitere ihe nlereanya m na nzukọ Charlotte, ebe ọ chọrọ ka ọ bụrụ ihu faịlụ DGN n'okpuru ụkpụrụ ntanetị nke ndị ọrụ nkịtị nwere ike ịgụ. Ndị na-ese kemgbe nnukwu site na mmalite, nyere na nke a kemgbe ụzọ nke na-akpụ DGN faịlụ na mfe faịlụ ahaziri XML ọnụ na ịnọgide na-enwe ihe niile dị ndụ nke a oru ngo si ịme ngosi uwe na-arụ ọrụ. N'ezie, nke a emewo ka ya oge ochie Microstation CAD manager ọrụ, na-a njikwa ihe, ProjectWise na-arụ ọrụ na-achịkwa ime ihe na AssetWise, ndụ okirikiri. Njikọ ejikọta ya ọnụ, na-eji ngwa gaa nsụgharị ngwakọ n'etiti desktọọpụ na ígwé ojii.
Ihe ngosi 2.0 nke M, kama ịchekwa data na faịlụ, na-elekwasị anya na nchekwa igwe ojii, n'okpuru ụdị nke data dị nnọọ ka BlockChain. Ihe nlereanya 1.0 ka etinyeworo anya na nke a, mana na 2009 ndị ga-eche banyere ikwu okwu banyere ígwé ojii dị ka ihe kacha mkpa; Anyị chere na ọ bụ ụzọ bara uru ị ga-esi nọrọ n'ihu Bentley Systems, nke Keith gosipụtara na ọhụụ ọhụụ. Nke a na-abata I-Model Hub, nke bụ ọganihu na ọkwa atọ nke BIM, ebe ihe ọmụma na-agakọ na gburugburu ebe obibi mega.
Ezigbo ihe nlereanya, dị nso karịa mgbe ọ bụla. O bu ihe di na ihe ekwuputara na nzuko a, nani otu okwu na-ada n'olu nza; Ihe odide. Bentley zụtara ngwa a afọ ole na ole gara aga na ụlọ ọrụ French, ugbu a, e gosipụtara ya dị ka ngwaahịa jikọtara ọnụ nke na-ese foto na ihe ngosi nke Descartes ahụtụbeghị. Ọbụna ha nyere anyị ihe ịma aka nke ịmepụta ụdị onwe anyị; karịa ndị na-amụ 100 enwetala ya na njedebe nke ụbọchị nke abụọ, jiri ngwa na nanị nzọụkwụ abụọ chọrọ ijiri foto ndị dị n'usoro nwere akụkụ nke karịrị ogo 15, na bọtịnụ ka ịmepụta ihe nlereanya ahụ; ọrụ nke ígwé ojii ahụ na-ahụ maka ime ihe ndị ọzọ, ka e wee nwee ike ịhụ ya anya, gbanwee, gbanwee, tụọ ya n'ogologo, dịka ihe nlereanya atọ, site na foto dị mfe!
Ọ bụghị ihe ọ bụla ndị ọzọ na-emeghị, ma karịsịa na nchịkọta ngwakọ nke ihe oyiyi dị elu nke agbakwunyere na ụdị zuru ezu nke ụda data adịghị emetụta, na m chere bụ ihe kacha mma m hụworo.
Bentley a kwadoro ihe mere ha anaghị ahụ GIS dịka ihe dị oké mkpa. Na-eche banyere Geo-engineering, ha na-aga n'usoro IFC, nke, ọ bụ ezie na ọ dị anya, bụ ụzọ dị mma nke a ga-esi mee ka ụlọ ọrụ niile chọrọ ịnwụ.
Ọrụ ndị ikpeazụ.
Dịka akụkụ nke ihe omume ahụ, a na-enye onyinye 17 maka ntinye ike, ebe 51 bụ ndị ikpeazụ maka nchịkọta 409. Enweela m ike ịhụ ọtụtụ n'ime ndị ikpeazụ ahụ, bụ ndị ụmụ foto foto foto ahụ na-abịakwute m maka ngbanwe nke usoro ụgbọ oloko, na-eji data nwetara na drones; N'ebe ahụ, ezutere m otu nwanyị obodo Nicaragua na Mexico nke, site na atụmatụ ha, site n'ebe dị anya gosipụtara aka ha Caribbean. Otu oru ngo Brazil nke ichikota usoro mmiri n'ime oghere ebe a na-echebe ya, enwere m mmasị na oru a nke na enwere m obi m ka ha merie ebe mbụ ha. N'ime ndị ọzọ, m ga-ekwu okwu n'otu isiokwu.
Kedu ihe ọ ga - eji gaa ogbako dị anya?
Ha bụ ụbọchị ise nke ọtụtụ mmụta, nke ọ bara uru karị ịjụ m ka m kọwaara onwe m; gbakwunyere uzo di iche iche iji kwatuo uzo anwuru anwu, dika anyi na-ekwu na onodu Saapani anyi na ihe omuma. M ka nwere, na obere okwu, laghachi, omume niile a ọhụrụ, bụ nke na-ekwu ka ebe ha na-eje ije ihe ná mba ndị na-enwe na nkà na ụzụ Vanguard, na ala ha anyị ụfọdụ na-ekwu nke na ụfọdụ kọrọ ọtụtụ ọnọdụ ebe-ebute ụzọ ọtụtụ n'ihe ndị bụ isi ma, ebe karịsịa karịa nkà na ụzụ ọhụrụ, ihe a chọrọ bụ na ndị na-eduga na oru ide mma omume na atụmatụ, elementrị ịdọ aka ná ntị anya na Filiks ma na-aghọta ha individualistic arụmọrụ ezi ebumnuche nke atụmatụ ochichi na iwu.
Previous Post«Previous Họrọ onye na-eweta maka nnukwu ozi - ahụmịhe nke onwe
Next Post III Nzukọ Kwa Afọ nke Ngalaba Cadastre na Land RegistryNext »